Soomaaliya Oo Faashil Kala Soo Huleeshay Shirkii Urur Goboleedka Igad | Marsa News
Soomaaliya Oo Faashil Kala Soo Huleeshay Shirkii Urur Goboleedka Igad
Hargeisa:(Marsanews) Shirkii maagaalada jabuuti ugu soo gabagaboobay urur goboleedka Igad ayaa ahaa mid ay Soomaaliya ku fashilantay Isku daygii ay rabtay in Kenya lagu canaanto
War murtiyeedkii ka soo baxay shirkii urur goboleedka Igad laguma xusin wax ku saabsan ashkatadii Soomaaliya ay ka gudbisay dowladda Kenya ee ahayd inay faro galin ku hayso midnimada iyo madax bannaanida.
Dowladdahii ku shiray magaalada Jabuuti waxa ay u soo jeediyeen oo kaliya, Soomaaliya inay diirada saarto jadwalka doorashooyinka iyo sidoo kale barnaamijyada dib u heshiisiinta iyo amniga dalka.
Soomaaliya ayaa dalbatay in koox madaxbanaan oo ka socota Igad loo diro xadka ay wadaagaan labada dal, halkaas oo ay Soomaaliya ku eedeysay Kenya in ay gacan ku siiso jabhad hubaysan, inkasta oo eedeyntaas ay Nairobi beenisay.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, Maxamed Cabdirisaaq ayaa sheegay in hoggaamiyeyaasha Igad ay ku cadaadiyeen Soomaaliya in lagu xalliyo arrinta Kenya wadahadal iyo is afgarad.
Wasiirka wuuxuu sheegay tallaabada ugu horreysa in ay noqon doonto xasilinta xaaladda iyo xiisadda labada dal.
Waxa aan jirin oo aan madashaa shirku ka socday lagu soo hadal qaadin ama wax layska waydiin waa dacwadii ay maamulka muqdisho ka gudbiyeen kenya, taas oo daaha ka faydaysa faashilka qaawan ee goobtaas ay kala soo huleeleen farmaajo iyo kooxdii uu horkacayay.